Art is My Life: 23 = 8395
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:53 PM
ကျွန်တော်က ပိုပြီး လက်ကျန် နည်းနေတယ် ... ကြိုးစားမှ တန်ကာကျမယ်ဗျာ ... ရက်တွေ ပြန်တွက်ကြည့်လိုက် ဦးမယ် ...
ဟက်ပီးဘတ်သ်ဒေး ... တူ ကိုစိုးဇေယျ ...
အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ ညီလေးရေ ...
မွေးနေ့မှစလို့ နောင်နှစ်များစွာတိုင် ငြိမ်းချမ်း အောင်မြင် ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေ စိုးဇေယျရေ ..။
Happy Birthday Soe Zeya! May you be healthy, wealthy and most importantly happy in life!
နှစ်ဆယ့်သုံး ဆိုတော့ အေးဆေးလေး ပွေးလို့ရသေးတယ်.. လုပ်ထား..ငါ့ကောင်ကြီး ။ ဟဲ ဟဲ နည်းနည်း နောက်ကျသွားတယ်. ကဲ ကဲ.. ဟက်ပီးဘတ်ဒေးဗျာ အသက် ခုနှစ်ရာ ရှည်ပါစေ.။ မိန်းမ ဆယ့်ငါးယောက်ရပါစေ..။ ကလေး နှစ်ဒါဇင် မွေးပါစေ..။
အမကတော့ အသက်ကို မေ့ထားတာကြာလှပေါ့.. ဒါပေမယ့် မွေးနေ့ရောက်ရင်တော့ ကိုစိုးဇေယျတွေးသလို မတွေးမိတာ အမှန်ပဲ.. အသက်ကြီးတဲ့ အမတို့က ပိုပြီး ကြိုးစားရတော့မယ်.. :)
အချိန်တွေမဖြုန်းမိအောင် အိမ်ရှေ့မှာ နာရီစင်ကြီး လာဆောက်ပေးရမယ် :P ဟဲဟဲ
ဟက်ပီဘက်ဒေးပါ ဒါရိုက်တာ စိုးကြီးရေ :)
အတွေးအခေါ် အိုင်ဒီယာတွေကို တကယ်ခိုက်တယ် :)
ဟက်ပီဘက်ဒေးပါ ဒါရိုက်တာကြီးရေ. ဟိ
၂၃ နှစ်ဆိုတော့ ဒါရိုက်တာ ကြာကြာလုပ်ဖို့ အချိန်ရတာပေါ့ကွာ.. ဟဲဟဲ..